Umxholo ongaphezulu, iingxaki ezingakumbi: Umzabalazo wentengiso yokuthengisa | Martech Zone
Kudala sipapasha kancinci malunga nezixhobo ezingqamanisa ukuthengisa kunye neenzame zokuthengisa. Ngokoluvo lwam, abameli bezentengiso banomsebenzi onzima ngakumbi ukukwenza kule mihla. I-59% yexesha labo besenza eminye imisebenzi ngaphandle kokuthengisa njengokuphanda iakhawunti kunye nokwenza izikhokelo. Kwaye abathengi kunye namashishini bayakwazi ukwenza uphando olungaqhelekanga kwi-Intanethi, ukuvavanya amanqaku, izibonelelo, iimveliso, iinkonzo, ukulinganisa kunye nokuphononongwa.
Ngaphandle kobuninzi bezinto zentengiso ezikhoyo, I-40% yezinto zokuthengisa azisetyenziswanga ngamaqela okuthengisa. Kwiinkampani ezingakwaziyo ukuqhubeka, abameli bezentengiso baye bathotywa ukuze baodole ngaphandle kwabaninzi ithuba lokwenza igalelo elibalulekileyo. Kwiinkampani ezingaphambi komjikelo, abameli bezentengiso baxhotyiswe ngokupheleleyo ngawo wonke umxholo abawufunayo ukunceda ekufumaneni iinjongo zethemba, ukwakha igunya nokuzithemba kunye nabo, kwaye babakhokelele kwizichaso kumjikelo wokuthatha izigqibo.
le infographic evela kwiQvidian Uhamba ngemini ebomini betr yokuthengisa ye-B2B yanamhlanje, eqaqambisa imiceli mngeni evelayo apha endleleni. Ngaba abathengisi bakho bayazi ukuba uyisebenzisa nini kwaye njani yonke imixholo, izixhobo, kunye noqeqesho obanike lona ukuze babe ngabacebisi abathembekileyo abathengi abalindeleyo?
I-8 ngaphandle kwe-10 yokuthengisa i-reps iziva ukoyiswa bubungakanani bolwazi Kuya kufuneka bajonge, oku kukhokelela ekuchitheni ixesha elininzi ekulungiseleleni nasekuhlalutyeni iinyani. Ukukwazi ukuphendula nokusabela kwiimfuno zethemba kubaluleke ngakumbi kunanini na ngaphambili ... kwaye ukuthengisa kufuna amandla okuthengisa amandla kwiinkampani ukuze abameli bezentengiso babonelele ngomxholo ofanelekileyo ngomyalezo ofanelekileyo ngokukhawuleza xa kufuneka okanye kuceliwe.
tags: hlalutya iimfunocloseukulandelisaulwazi olugqithisiweyoudliwanondlebeisizukulwana esikhokelayointengiso kunye nokulungelelaniswa kwentengisothethwanothethwanoisiphoithembaqvidiumxholo wentengisoukusebenza ngokuthengisaUkunika amandla ukuthengisaummeli zintengisoumthengisiinkonzo
Uyenza njani into yokuZenzekelayo ukuba uyiThengise